Teknolojia famokarana palitao
Teknolojia famokarana palitao Araka ny lamba Ao amin'ny fiarahamonina maoderina dia matetika no ampiasaina ny akanjo mando avy amin'ny sarimihetsika plastika na akanjo lava voatsabo. Ny akanjo orana toy izany dia manana tombony amin'ny fanaovana azy mora, maivana sy malefaka, loko isan-karazany ary vidiny ambany . Amin'ny fiainana isan'andro, misy karazana ra ...
Marcintos dia teraka tamina fianakaviana Scottish. Tena tia mianatra sy be zotom-po izy tamin'izy mbola kely. Manantena ny ho mpahay siansa izy rehefa lehibe ka mamorona zavatra maro mbola tsy hitany. Na izany aza, vokatry ny fahantrana tao amin'ny fianakaviana dia nianatra tany ivelany izy tamin'ny fahazazany, trano akaikin'ny orinasa kely t ...
Ny akanjo mando dia vita amin'ny lamba tsy tantera-drano vita amin'ny lamba tsy tantera-drano, ny lamba tsy tantera-drano azo ampiharina dia misy kasety, lamba solika ary sarimihetsika plastika, sns. Ao amin'ny Tarana Zhou, ny palitao dia namboarina tamin'ny "lasantsy" lavanila ho toy ny palitao miaro amin'ny orana. Ity palitao ity no inona p ...
Fampandrenesana fialantsasatra amin'ny Fetin'ny Lohataona
Sampan-draharahan'ny varotra: manomboka amin'ny 14 feb. 2018 ka hatramin'ny 22 feb
Tsy mividy ponchos fotsiny izahay fa koa lambam-borona moka
Tsy mividy ponchos fotsiny izahay fa koa harato moka zaza. Vonona ny fitehirizana moka.
Voninkazo 300 000 nilatsaka
Vita ny famoahana 30000 pcs PE azo ampiasaina amin'ny orana Rain Poncho ho an'ny mpanjifa Indonezia mahazatra.
Tonga ny fitaovana manta, Tongasoa eto amin'ny filaminana
Ankalazao ny Vondrona Tengxing hamita santionany amin'ny akanjo palitao miaraka amin'ny KFC
Mankalazà ny Vondrona Tengxing hamita santionany amin'ny akanjo palitao miaraka amin'ny KFC, afa-po tanteraka ny mpanjifa ary manantena ny baiko lehibe manaraka
Mpanjifa izay mandray baiko amina tapitrisa poncho amerikana ho an'ny orinasanay
Tao anatin'ny fiaraha-miasa tonga lafatra teo amin'ny orinasa sy ny mpiasa, vita ny palitao / orana orana.
Tao anatin'ny fiaraha-miasa tonga lafatra teo amin'ny orinasa sy ny mpiasa, vita ny palitao / Rain Poncho.
Topazo maso ny kalitaon'ny akoran'orana / poncho anay
Topazo maso ny kalitaon'ny akora poncho anay
Poncho mamoaka kabinetra amin'ny folo alina amin'ny hariva
Misy hatrany ny fahatapahan-jiro mandritra ny roa andro mba tsy hanemotra ny fandefasana azy. Ireo mpiasa amin'ny 10 ora hariva dia mbola mitafy ponchos ary mahatalanjona.